VMI (Iibiyaha Maareynta alaabada) - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Fumax waxay leedahay barnaamijka Maaraynta Iibiyaha Iibiyaha (VMI) halkaasoo ay macaamiisha ugu fidiso habab ay ku hagaajinayaan waxqabadka Qalabka 'Chain Chain'. Barnaamijka VMI wuxuu mas'uul ka yahay kaydinta alaabada iyaga si waafaqsan qeexitaannada horay loo sii caddeeyay.
Kooxdu waxay haysaa raad-raaca waxa helitaanka badeecaddu daalan tahay iyadoo lagu saleynayo warbixinnada iibka waxayna sidoo kale maamushaa keydka buuxinta.
Barnaamijka VMI wuxuu faa'iido u leeyahay marka macaamilku uu gabaabsi noqdo ama uu u baahdo keyd keyd ah, maadaama ay keydineyso kharashka bakhaarka iyo culeyska haysashada heerarka agabka.
Xitaa ka sii wanaagsan, Barnaamijka VMI sidoo kale wuxuu kuxiran yahay Barnaamijka MTO (U Sameeyay Amar) iyo JIT (Waqtigaas) ee gaarsiinta Barnaamijka.
Barnaamijkani wuxuu faa'iido u leeyahay 3-6 bilood ee saadaasha alaabooyinka la dhammeeyay si markaa macaamilku uusan u haysan wax badan ama ka yar oo ah alaabooyinka la doonayo. Kaliya maahan inay kaa caawiso ilaalinta helitaanka keydka sida ku cad alaabada uu dalbado macmiilku, taasoo la kormeero toddobaadle ama bille laakiin sidoo kale waxay ilaalisaa daahfurnaanta isticmaalka bil kasta ee alaabada.
Gabagabadii, Tilmaamaha Maareynta Iibiyaha waxay u oggolaaneysaa macmiilka inuu xoogga saaro iibinta inbadan oo badeecadooda ah, isla markaana uu haayo tabta alaabada iyo helitaanka keydka, dayactirka waxtarka iyo jawaabta degdegga ah ee amarrada.
Waa maxay Faa'iidooyinka VMI?
1. Tilmaamo aan baruur lahayn
2. Kharashaadka Howlgalka oo Hoose
3. Xiriirka Alaab-qeybiye oo Adag